Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha | Page 35
Hadaba waxaa is weydiin mudan waxa sababay in cuduradaan ay dalka Soomaaliya aad ugu soo bataan oo aad arkeysa boqolaal la ildaran cuduradaan. Dad badan ayaa aaminsan in ay cuduradaan keenaan dhibaatooyinka farada badan ee uu shaqsiga la kulmo kuwaas oo ku abuura cabsi iyo walwal fara badan balse waxa dhabta ah ee keenay in cuduradaan ay dalka ku sii fidaan waa soo dhoofinta Cuntooyinka iyo daawooyinka dacay. Maadaama aysan jirin waaxda taya dowrka cuntooyin iyo daawooyin ee dowlada Soomaaliya, waxaa dhacday in ganacsato Soomaaliyeed ay wadanka soo galiyaan maalin kastaa cuntooyin iyo daawooyin dacay kadib na marka ay dalka …
Falsafada iyo Siyaasada arrimaha bulshadaSiyaasadda & Diplomasiyadda
Dalkayaga waxaa uu ubaahanyahay dad leh maskax nashaadsan, haddii dalka uu gacanta usii galaya shisheeya yaa abuuri karo isbedel? Dowlada aynu deriska nahay ee Itoobiya waxay balan qaaday dhowr qarni ka hor in Soomaaliya gebi ahaanba la wareegaan, hadda waxaa muuqda in wax badan ka hergelayaan ujeedkii ayna naga laheed. Miyaad naxariis ka sugeysaa nin aad awoowgii baday inuu cuno hilib cayriin ah? Waa may, waxaa hubaal ah in hadafkooga u hergeli doona waqti dhaw haddii aan la helin dhalinyara isxilqaamta oo mara wadadii dhalinyaradii SYL. Waxaad arkeysaa marka aad tagto gobolada Soomaaliya ee xaduuda la leh Itoobiya rag …
Caafimaadka iyo SayniskaFalsafada iyo Siyaasada arrimaha bulshada
AkhriFalsafada iyo Siyaasada arrimaha bulshada
AkhriDhaqanka, Afka Hooyo, Taariikhda Soomaaliya & DuniddaFalsafada iyo Siyaasada arrimaha bulshada